Warbixinta Machadka Daraasaadka Heritage - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Warbixinta Machadka Daraasaadka Heritage
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 15 Febraayo, 2013, 02:43 GMT 05:43 SGA
Machadka Heritage ee daraasaadka oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa maanta soo saaraya warbixin uu ugu magacdaray dib u celin lagu deg degay, oo uu kaga hadlayo go'aankii dowladda Kenya ee ku saabsanaa dadka qaxootiga Soomaalida ee deggan Kenya.
Machadka Heritage ee daraasaadka oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa maanta soo saaraya warbixin uu ugu magacdaray dib u celin lagu deg degay, oo uu kaga hadlayo go'aankii dowladda Kenya ee ku saabsanaa dadka qaxootiga Soomaalida ee deggan dalka Kenya.
Machadka ayaa sheegay in daraasadda uu sameeyay uu ku ogaaday in tiro yar oo ah 6% dadka qaxootiga inay diyaar u yihiin inay laabtaan, laakiin intooda badan ay ka walaacsan yihiin xaaladda ammaanka Soomaaliya iyo weliba halka ay dagi doonaan.
Waxa ay ka digeen in arrintan ay keeni karto dhibaatooyin dhawr ah oo ay ka mid tahay ammaan darro iyo dhaqaalaha oo ay saameyso.
Machadku waxa uu sheegay in arrinta qaxootiga loo baahan yahay in laga fiirsado oo aan lagu degdegin isla markaana ay iska kaashadaan dowladdaha Soomaaliya iyo Kenya, isla markaana ay hey'adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay ay gacan ka siiso sidii loo habbeyn lahaa barnaamijka dadka qaxootiga ah.